တစ်သံသရာမှာ….တစ်ခါပဲရမယ်။။ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Buddhism » တစ်သံသရာမှာ….တစ်ခါပဲရမယ်။။
Posted by “ဘီလူးၾကီး”ogre on Oct 2, 2011 in Buddhism |9comments
ကျုပ်တို့လူသားတွေ လူ့လောကကြီးထဲကိုလူရယ် လို့ အမိဝမ်းခေါင်းကို ခြေစုံကန်ထွက်လာကထဲက လူလောက လူဘဝ မှာ
လူလူသူသူလျှောက်လှမ်းနိုင်ဘို့ ကောင်းမွန်မှန်ကန်တဲ့ “အဆုံအမ” တော့လိုအပ်မှာအမှန်ပါပဲ …ဆရာက တပည့်ကိုဆုံးမ
တာ ဝါဒရှိသူက ဝါဒမဲ့သူကိုဆုံးတာ ပညာရှိသူကပညာမဲ့သူကိုဆုံးမတာ မိဘက သားသမီးကိုဆုံးမတာ အဆုံအမတွေ အမျိုး
မျိုး ရှိကြပါတယ်။။ အဆုံအမ မရှိတဲ့ လူ အဆုံးအမ မခံယူဘူးတဲ့သူ အနည်းဆုံး အယူဝါဒတစ်ခုခု ကိုမျှ သက်ဝင်ယုံကြည်မှုမရှိ
တဲ့သူရဲ့ စိတ်သဏ္ဌာန်ဟာ အဝိဇ္ဇာ ဖုံးလွှမ်းပြီး အယူအဆ အတွေးအကြံများဟာ ကောင်းတာလဲရှိနေတတ်သလို မကောင်း တာများလဲ တွေကြံနိုင်ပါတယ် အဆုံးအမ မရှိခြင်းကြောင့် အကြောင်းအကျိုး အမှားအမှန်ကို မသိပဲ တွေးကြံ ပြောဆို လုပ်ကိုင်
ကာ နေတတ်ပါတယ် ။။..ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ် သတ္တဝါပဲဖြစ်ပါစေ မသိပဲလုပ်သူနှင့်သိလျှက် လုပ်သောသူ နှစ်ဦးတွင် မည်သူက အ
မီး ကိုသိလျှက် ကိုင်သောသူနှင့် မသိပဲကိုင်သောသူ ကဲသို့ မသိပဲကိုင်သောသူက သိလျှက်ကိုင်သောသူထက် ပိုပူနိုင်ပြီး
ပိုအပြစ်များနိုင်ပါတယ် သိလျှက်ကိုင်သောသူကတော့အသိဉာဏ်ပညာနှင့် ယှဉ်ကာသတိထားကိုင်တွယ်ခြင်းကြောင့် အပူ
သက်သာနိုင်ပါတယ်။။ ကျုပ်တို့ တစ်တွေ အပူသက်သာဖို့ဆိုရင် အသေချာဆုံးက အဆုံးအမရှိဘို့ အဆုံးအမကို ခံယူထားဘို့
အဆုံးအမကိုလိုက်နာဘို့ လိုအပ်မယ်ဆိုတာ သေချာလှပါတယ်။။
အဆုံးအမကို ခံယူတော့မယ်ဆိုရင်ရော ဘယ်လိုအဆုံးအမ မျိုးတွေကို ခံယူရမလဲ ဘယ်လိုအဆုံးအမမျိုးက အပူကိုငြိမ်းအေး
စေတာလဲ၊ ဘယ်လိုအဆုံးအမမျိုးက သဘာဝ ဓမ္မဖြစ်တာလဲ၊ ဘယ်လိုအဆုံးအမ မျိုးက သံသရာကိုလွတ်မြောက်စေတာလဲ
အဲဒီ အဆုံးအမဟာ ဘယ်လိုမျိုးလဲ ဆိုတာကို ရွေးချယ်စဉ်းစားဘို့လိုပါတယ် ။
ကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာဟာ “အဆုံးအမ”ကိုခံယူတဲ့ဘာသာပါ ဘုရားရှင်ဟာ သံသရာမှလွတ်မြောက်ကြောင်းတရားတွေကိုသာ
သင်ကြားပြသခဲ့ပါတယ် သံသရာလွတ်ကြောင်း သင်ကြားပြသနိုင်မှသာ ဆရာအစစ်ဆရာအမှန်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်၊ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်
များဟာ ဘုရားခမည်းတော်ကို မကိုယ်ကွယ်ပါဘူး ဘုရားမယ်တော်ကို မကိုယ်ကွယ်ပါဘူး ဘုရားအလောင်းကိုလဲ မကိုယ်
ကွယ်ပါဘူး ဘာကြောင့်လဲ ဆိုရင်ဖြင့် အပြစ်များတဲ့ ပုထုဇဉ်များဖြစ်လို့ပါပဲ ဘဝါဘဝပေါင်း လေးအသင်္ချေနှင့်ကမ္ဘာတစ်သိန်း
ပါရမီတော်များဖြည့်ကျင့်စဉ်ကာလများက မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုမကိုယ်ကွယ်ခဲ့ကြပါ သဗ္ဗညုတရွှေဉာဏ်တော်ကိုရလို့ သစ္စာ
လေးပါးမြတ်တရားများကို ကိုယ်တိုင်လဲသိမြင် အခြားသူများကိုလဲ သင်ကြားပြသဟောပြောနိုင်လို့သာ လောကတစ်ခွင်
တုမယှဉ်သာသော အကျိုးတရားများရရှိကြသဖြင့် သတ္တာဒေဝမနုဿာနံ လူနတ်တို့၏ဆရာအဖြစ် ကိုးကွယ်ဆည်းကပ်ကြ
သံသရာမှ ထွက်မြောက်ကြောင်းတရားများကိုသင်ကြားပြသနိုင်မှသာ ဆရာအစစ် ဆရာအမှန်ဖြစ်ပါတယ်
ဘုရားရှင်၏အဆုံးအမများသည် သံသရာမှလွတ်မြောက်ကြောင်းတရား ဓမ္မများသာလျှင်ဖြစ်ပါတယ် ဓမ္မဆိုသည်မှာ အမြဲတမ်း
မဖောက်မပြန်မှန်ကန်နေသော သဘာဝဓမ္မများသာဖြစ်ပြီး လူတစ်ဦး တစ်ယောက်၏အကြိုက်ကို လိုက်နေရတဲ့ တရားမျိုးမဟုတ်
ပဲ သဘာဝအတိုင်းမှန်ကန်နေတဲ့ တရားမှသာလျှင် တရားစစ်တရားမှန် ဓမ္မစစ်ဓမ္မမှန်ဖြစ်ပါတယ် သံသရာလည်ကြောင်း တရား
များတွင် အဓိက အခြေခံကျလှတဲ့ သက္ကာယဒိဌိဖြစ်ပါတယ် အလုံးစုံသောအကုသိုလ်မှန်သမျှသည် သက္ကာယဒိဌိကြောင့် သာ
လျှင် ဖြစ်ပေါ်လာရပါတယ် သဘောပေါက်လွဲ အယူအဆလွဲ အတွေးတွေလွဲကြရင်းနဲ့ ဝါဒအမျိုးမျိုးပေါ်ပေါက်လာကြရပါတယ်
ဘုရားရှင်ရဲ့ အဆုံးအမကို အခြေခံပေါ်ပေါက်လာတဲ့ ဂိုဏ်းဂဏ ဝါဒတွေ ဘုရားရဲအဆုံးအမအတိုင်းသာ လိုက်နာလုပ်ဆောင်
ကြရမှာဖြစ်ပေမယ့် အများအားဖြင့် တစ်ဦးကောင်း တစ်ယောက်အကြိုက် ကာလဒေသနဲ့ လိုက်ဖက်တဲ့အမြင်တွေကို ဆွဲလွဲ
စေ့စပ် ဗုဒ္ဓအမှီပြုတဲ့ ဝါဒတစ်ရပ်အဖြစ် တစ်စင်ထောင်လာကြခြင်းပါပဲ ဒီလိုတစ်စင်ထောင် ထင်ပေါ်လာခြင်းဟာလဲ ပုထုဇဉ်
လူသားများဖြစ်သည်နှင့်အညီ သောတာပန်များမဟုတ်ကြပဲ ဒိဌိနဲ့ ဝိစိကိစ္စာ မကွာနိုင်ကြသေးလို့သာ ဟိုလူပြောဟုတ်နိုးနိုး
ဒီလူပြောဟုတ်နိုးနိုး ဖြင့် အားကိုရာအစစ်အမှန်မရှိပဲ သံသယ များနဲ့သာ ဘိုးတော်ဆိုလဲ ပြေးရှိခိုး/ ဘဘုရားဆိုလဲဦးတိုက်/
ဝါဒရှင်ဆိုလဲ ပြေးမှီခိုလိုက်/(၃ရ)မင်းဆိုလဲ ကိုးကွယ်လိုက်/ရေဆူဆိုလဲ ဖူးလိုက်ရနဲ့ ဖြစ်နေတာပါပဲ သာသနာနဲ့တွေ့နေပါ
ရက်နဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာစစ်စစ် ဖြစ်နေပါရက်နဲ့ တရားစစ်တရားမှန်ရှာမတွေနိုင်ဖြစ်ပြီး ဒိဌဓမ္မအစွမ်းတွေပြကြတဲ့ ပစ္စုပ္ပန်ဝါဒီ လတ်
တလော ခတ္တခဏ ချမ်းသာရာအတွက် ရှာဖွေရင်း မိဆ္တာဒိဌိ များတန်းခိုးထွားလာရခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။။။။
ဗုဒ္ဓသာသနာမကွယ်သေးပါ ဘုရားရှင်၏ အဆုံးအမများကို သင်ကြားပြသပေးနိုင်တဲ့ သံဃာတော်အရှင်မြတ်များရှိပါသေးတယ်
အဆုံးအမကိုနားလည်အောင်ပြောလို့ရတဲ့ ဘာသာစကားလဲရှိနေပါတယ် ကျွန်ုပ်တို့မှာကြားနိုင်တဲ့နားတွေလည်းရှိပါတယ်
စစ်မှန်တဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေလဲဖြစ်နေပါတယ် ကျင့်ကြံနိုင်တဲ့ခန္တာကိုယ်လဲရှိပါတယ် အမှာအမှန်ဝေဖန်းပိုင်းခြားနိုင်တဲ့ဉာဏ်
တွေလဲရှိနေပါတယ် သာဝက အနေနဲ့သာကျွတ်တမ်းဝင်လိုလှတယ်ဆိုရင်ဖြင့် အခုကစလို့ရနေပါတယ် သံသရာတစ်လျှောက်
ကျင်လည်ရာ ဘဝတိုင်း ဘုရားသာသနာနဲ့ တွေကြုံဘိုရာခဲယဉ်းလှပါတယ် ဒီလိုခဲယဉ်းလို့သာ ဒီဘဝ ဒီခန္တာနဲ့ ရှိနေကြခြင်းပါပဲ
ကျုပ်တို့တစ်တွေ ဘယ်ဘဝကလာပြီး ဘယ်ဘဝကိုသွားနေကြတယ် နောင်သံသရာဘာတွေဖြစ်အုံးမယ် နောက်ဘဝနောက်
နောက်ခန္တာမှာ အဆုံးအမကိုမခံယူနိုင်တဲ့ အဟိတ်တိရစ္ဆာန် တွေဖြစ်ခဲမယ်ဆိုရင်ဖြင့်ဘယ်လောက်ပဲ ကုသိုလ်ထူးလို့ ဘုရားရှင်နှင့်ကြုံဆုံ ခဲ့ရရင်တောင် “သီလ/သမာဓိ/ပညာ”များတည်နိုင်မှာမဟုတ် တစ်ဝဲလည်လည်သံသရာဝယ်ဖြစ်ကြရမှာပါ
ဒါကြောင့် တစ်သံသရာလုံး ဒီတစ်ခါသာကြုံရတဲ့ သာသနာခေတ်မှာလူဖြစ်ခိုက် အမှားတွေနောက်ကိုလိုက်နေကြအုံးမယ် ဆို
ဆရာကုန်ရှုံးလျှင် တစ်သံသရာလုံးမှောက်မှာ သေချာပါတယ် …
ဆရာကောင်းကို ရွေးချယ်တတ်ဖို့လိုပါတယ် …
ဘယ်လိုရွေးချယ်မလဲ ??? ဆရာကောင်းဟုတ်မဟုတ် ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ ???
အပေါ်က..ကိုရင်ဘီလူးရေးထားတဲ့အတိုင်းသာဆို..hidden message က…
“ငါ့ဆရာတင်လိုက်… ငါကဆရာကောင်းပဲ..။ မတင်ရင်..နင်…တစ်သံသရာလုံးမှောက်မယ်…။”
ကျွန်တော်တို့ ဗုဒ္ဓဘာသာမှာတော့ မြတ်စွာဘုရားရှင်ဟာ ဆရာတစ်ဆူပါပဲ
ဘုရာရှင်ရဲ အဆုံးအမကို လိုက်နာတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များကတော့
“ကောင်းကင်ဘုံကလဲ စောင့်ပြီး မကယ်တင်ပါဘူး”
မိမိကိုယ်ကိုမိမိ ကယ်တင်ဘို့ကိုသာ နည်းပေးလမ်းပြခဲ့ပါတယ်
သံသရာက လွတ်မြောက်လိုတယ် ဆိုရင်ဖြင့် ဘုရားရှင်၏အဆုံးအမများအားလိုက်နာ၍
မိမိ ကိုယ်တိုင် ကျင့်ကြံကျိုးကုပ်အားထုတ်မှသာ ရရှိမယ်ဖြစ်ပါကြောင်း။။
(“အတ္တဟိ အတ္တာနော နာထော.”).
ပါဌိ အရေးအသားများ မှားယွင်းပါက ကျွန်နုပ်ရေးသားသူ၏ အမှားများသာဖြစ်ပါကြောင်း
ဘီလူးရယ် ဘယ်လိုဖြစ်တာတုံး.. သဂျီးရွာမှာနေပြီး ပြူးပြပြဲပြနဲ့။ ဆရာအရေးကြီးတာ ထောက်ခံပါတယ်။ ကြုံလို့စာမြီးလေး အစဉ်အတိုင်းပြောရရင် မှင်စာဆရာ သရဲ၊ သရဲဆရာ သဘက်၊ သဘက်ဆရာ ဘီလူး၊ ဘီလူးဆရာ ကျား၊ ကျားဆရာ ကြောင်။ ကြောင်ဆရာကတော့ သဗ္ဗေညုတ္တရွှေညဏ်တော်ပိုင်ရှင် သုံးလူးထဋ်ထား ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားသခင်..။
(သံသရာလွတ်ကြောင်း သင်ကြားပြသနိုင်မှသာ ဆရာအစစ်ဆရာအမှန်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်)
ကျွန်တော်က အကိုတော်ရဲ့ ကောမက်များကိုဖတ်ပြီးလေးစားမိကြောင်းပါ
ဆရာတော် သမတော် များဟောကြားရာ တရားများကိုတော့ဖြင့် နေ့စဉ်မပြတ်
ဗုဒ္ဓ အဆုံးအမများ အား အဓမ္မဝါဒီများ၏ အယူအဆများမဖုံးလွှမ်းနိုင်စေချင်ငှာ
ဓားတစ်လက် နိုင်သူက ဓားတစ်လက်နှင့်သော်လည်ကောင်း ဝိုင်ဝန်းကာကွယ်ခြင်းသာဖြစ်
ဆရာကုန် ရှုံးလျှင် ဖြင့် တစ်သံသရာလုံး မှောက် မယ်
ဖတ်ရင်းစဉ်းစားရင်း မှန် မှန်လာတာ ကို ထင်ထင်ရှားရှားတွေ ့ရပါတယ်
သစ္စာဆိုတဲ့ အမှန်တရားကို ကိုယ်တိုင် သိမြင်နိုင်ကြပါစေ။
“ပုထုဇဉ်လူသားများဖြစ်သည်နှင့်အညီ သောတာပန်များမဟုတ်ကြပဲ ဒိဌိနဲ့ ဝိစိကိစ္စ မကွာနိုင်ကြသေးလို့သာ ဟိုလူပြောဟုတ်နိုးနိုး
တလော ခတ္တခဏ ချမ်းသာရာအတွက် ရှာဖွေရင်း မိဆ္တာဒိဌိ များတန်းခိုးထွားလာရခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။။။။”
နောက်တခေါက် ဖတ်မိအောင်လို့ ကော်ပီ ဆွဲချလိုက်တယ် .. တန်းဖိုးရှိတဲ့ ပို့စ်ပါဗျာ..